Mbutu vs Mombe – Man is caught in between – Makuhwa.co.zw
Mbutu vs Mombe – Man is caught in between
Varume hama, ndaita dambudziko ndibatsirei. Vakomana vakarasha mombe yangu, mushure memazuva matatu ndakabuda kundotsvakavo, nezuva rechina ndakavirirwa nezuva ndirikure ndokukumbiri pekurara panoumwe musha.
Ndakagashirwa zvakanaka zvikanzi muroora gadzirira mweni pekuvata. Muroora uyu aimbova muskana wangu tichirikuchikoro. Sezvineivo akandigadzirira pekurara. Pakati peusiku akauya akati ndiwe wakandidzidzisa izvi achibata chinhu changu saka hande kwandinovata umbondipa mamwe malessons.
Ndakada kuramba ndichiti tarisa ndiri mweni pano uye wakazoroorwa iwe akati murume wake akaenda joni makore mana apfuura. Musure mekunge ndaita zvose zvaaida nemalessons aye, kwavekuchena ndakaona msoro wemombe yangu yandirikutsvaka wakarembera pamtariko mumba umu. Kuti ndibvunze zvinondiremera. Vanozoti ndakaiona sei, ndakapindamo ndichidei? Zvino ndoitasei mombe yangu yorova here, kana ndabvunza ndobvunza ndichiti kudii? Ndibatsirei hama dzangu please reply in comments thanks…..
Related Topics:Mbutu vs Mombe
Baby rekuWenera rakanditamba nyowani after i caught her giving punani to my brother
TwumaHure utwu twakandibira mari yangu